श्रीमानले छोडेपछि सडकमा यस्तो अवस्थामा भेटीईन आमा, कसैले नि हेरेनन बुढेसकालमा घर न घाटको भन्दै रुवाबासी – Complete Nepali News Portal
श्रीमानले छोडेपछि सडकमा यस्तो अवस्थामा भेटीईन आमा, कसैले नि हेरेनन बुढेसकालमा घर न घाटको भन्दै रुवाबासी
काठमाडौ । जब मानिसलाई पिडा पर्छ तब मात्र थाहा हुन्छ सुख, पिडा र रोदनको असली कुरा र यस्को दर्दनाक अवस्था पनि । हो आज हामी यस्तै आफनै श्रीमानबाट बुढेसकालमा पनि यसरी पिडित भएर सडक पेटीमा भौतारिदै हिडेकी एउटी बूढी आमाको बारेमा कुरा गर्दैछौ । यि आमाको घर गोर्खा हो नाम बिबा खनाल जो अहिले ५० बर्ष भन्दा बढी भईन तर यिनको पिडा भने उस्तै छ । सानैबाट पिडापिडैमा हुर्केकी यिनी पिडा लुकाउन रातभरि रुने गर्छिन ।
आफन्त र इष्टमित्रले पनि हेरेनन नत आफनै सनतानले । भन्छन नि बुढेसकालमा के के सहनपर्छ के के देख्नपर्छ त्यो साचो भएको छ यि आमाको जिन्दगीमा । पिडा भुलाउन बेला बेलामा गित गाएरै आफै भित्र रमाउने गर्छिन । गित लेख्छिन, आफैभित्र खुशी हुन्छिन तैपनि पिडाले कहिले साथ छोडदैन । यि आमाका छोरीहरु पनि धेरै छन, धेरैचोटि छोरीको घरमा गएर पनि बसिन तर सासु ससुराले के भन्लान ? र छिमेकीले के सोच्लान ? भनेर अहिले भागेर काठमाडौ आएकी छिन । रुदै हार गुहार गर्छिन मलाई सहयोग गर भन्छिन तर कसैले सुन्दैनन, हेरौ यि सडकमा भौतारिएको आमाको दर्दनाक ब्यथा |